Gary Neville oo muujiyay sida uu ula yaabay natiijooyinka kooxda Manchester United – Gool FM
(Manchester) 14 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka Premier League, kaddib markii ay garoonka Turf Moor ku soo garaaceen Burnley habeenkii Talaadada ee la soo dhaafay.
Goolkii Paul Pogba ee qaybtii dambe ciyaarta ayaa ku hogaamiyay kooxda Ole Gunnar Solskjaer inay saddex dhibcood kaga qabtaan Liverpool hoggaanka horyaalka kahor kulanka ay Axada ku wada ciyaari doonaan garoonka Anfield.
Kaddib markii ay qaab liita kaga biloowdeen xilli ciyaareedkan, Man United ayaa heshay 29 dhibcood ka mid ah 33-dii dhibcood ugu dambeysay oo ay aheyd inay gacanta ku dhigaan, waxaana ay hogaanka u qabteen markoodii ugu horeysay tan iyo 2013.
Haddaba halyeeyga kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa sheegay in United ay isku muujisay inay tahay koox dhab ah oo u tartameysa horyaalka, kaddib qaab ciyaareedkooda labadii bilood ee ugu dambeysay, wuxuuna yiri:
“Waa xilli layaab leh.. haddii aad i weydiiso bilowga xilli ciyaareedka waxaan dhihi lahaa Fursad uma lahan inay ku guuleystaan ​​horyaalkan.”
“Laakiin hadda maadaama ay joogteeyeen qaab ciyaareedkooda cajiibka ah, waxaan leeyahay maxay u aamini la’ayihiin taageerayaasha United awoodda ay kooxdu u leedahay inay guuleysato.”
“Kooxda waxay ku jirtaa xaalad aad u fiican oo ka duwan kooxaha kale, safka hore ee weerarka waxaan ka helaynaa Cavani, Rashford, Martial iyo Greenwood marka lagu daro Bruno Fernandes iyo Pogba, oo waayadan fiicnaa.”
“Waxaan arki karnaa in Manchester City oo kaliya ay ku nooshahay daqiiqad wanaagsan oo deggan.”
“Cidna kama hadasho iyaga, laakiin runti waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan waxayna noqon karaan halista dhabta ah.”
Kooxda AC Milan oo la kulantay Wakiilka Weeraryahan ay doonayso inay dib ugu soo celiso dalka Talyaaniga